भोलि पुष १२ गते आइतबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल ! पाथिभरा माताको दर्शन् गर्नुहोस भेटि स्वरुप् १ शेयर् गर्नुहोस – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/भोलि पुष १२ गते आइतबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल ! पाथिभरा माताको दर्शन् गर्नुहोस भेटि स्वरुप् १ शेयर् गर्नुहोस
भोलि पुष १२ गते आइतबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल ! पाथिभरा माताको दर्शन् गर्नुहोस भेटि स्वरुप् १ शेयर् गर्नुहोस
आजको प्रयास र व्यापारबाट दीर्घकालिन फाइदा हुनेछ । आफ्नो विचार र योजनालाई रचनात्मक रूप प्रदान गर्ने प्रयास गर्नुहोला । समय राम्रो रहेको छ । विशिष्ट व्यक्तिलाई प्रभावित तुल्याएर काम बनाउन सकिने छ । सहयोगीहरूको साथ र सहयोगले राम्रा काम गर्न सकिनेछ ।
अग्रज तथा आफन्तको सहयोगले राम्रा काम गर्न सकिनेछ । बैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धीत कामहरु फस्टाएर जानेछ भने लामो विदेश यात्राको सम्भावना रहेको छ । अध्ययन तथा अध्यापनमा रुचि बढेर जानेछ । व्यापार व्यावसायमा गरेको लगानी बाट भने जस्तो आम्दानी हुनेछ ।
सिमित स्रोत तथा साधनबाट असिमित आवस्यकता पुरा गर्नु पर्दा रुपैया पैसाको व्यावस्थापन गर्न गाह्रो पर्नेछ । नयाँ काम गर्नु पहिले ध्यान दिनुहोला, अवसरवादीहरुले फसाउन सक्छन् । माया प्रेममा एक अर्काबिच मनमुटाव हुने तथा पति पत्नी बीचको सम्बन्धमा अबिश्वास बढ्नेछ ।
पारिवारिक सम्बन्ध सुदृढ बन्नेछ । हाकिम, मातापिता वा विशिष्ट व्यक्तिको विचारले प्रभावित तुल्याउन सक्छ । बन्द व्यापार र पेसा व्यवसायका क्षेत्रमा उन्नती प्रगतिको वातावरण बन्नेछ । नोकरी अथवा व्यवसायसँग सम्बद्ध काममा कुनै ठोस परिणाम देखा पर्नेछन् ।
अध्यात्म र दर्शनप्रति मन आकर्षित हुनेछ । प्रेम र भाइचारा जीवन्त तुल्याउने अवसर प्राप्त हुनेछ । मान्यजन र अग्रजको आशीर्वाद प्राप्त हुनेछ । सामाजिक क्षेत्रमा सक्रियता बढाई राम्रा काम गर्न सकिनेछ । माया प्रेममा रमाउन चाहनेहरुका लागी समयले साथ दिनेछ ।
सामाजिक र पारिवारिक सम्बन्ध सुदृढ हुनेछ । कुटुम्ब र भाञ्जाभाञ्जीसँग सुमधर सम्बन्ध कायम हुनेछ । पारिवारिक खुशी मिल्नेछ । आर्थिक पक्ष सुदृढ रहनुका साथै समस्याहरू समाधान हुनेछन् । महत्वपूर्ण स्थानमा बोली बिक्ने सम्भावना समेत छ । बन्द व्यापारमा फाइदा छ ।
व्यावसायमा मनमुटाब सिर्जना भई साझेदारहरु बीच फाटो हुन सक्छ ध्यान दिनुहोला । व्यावसायिक यात्रा हुने भएपनि गन्तब्यमा पुग्नु अगी नै बिभिन्न कारणले यात्रा स्थगित गर्नुपर्ने हुन सक्छ । आफन्त तथा परिवारमा कामको तालमेल नमिल्दा मनमुटाव हुनेछ ।
तर्क, विवाद र प्रतिस्पर्धामा तपाईँको नाम अग्र स्थानमा आउनेछ । पद प्राप्तिका लागी गरिएको प्रतिस्पर्धामा विजयी भइने छ । कार्यक्षेत्रमा आफ्ना कुराहरुमा सबैजना सहमत हुनेछन् । अफिसियल यात्राको प्रसस्त सम्भावना छ भने दीर्घकालिक फाइदा पुग्नेछ ।
भाइबहिनी र छोराछोरीका साथ मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नेछ । उन्नती, प्रगती र शैक्षिक क्षेत्रमा ध्यान जानेछ । भौतिक स्रोत साधनको प्रयोग गरि आम्दानी बढाउन सकिनेछ । सामानको व्यापारमा मन्दि आउने छ । प्रेममा रमाउन चाहनेहरुका लागी समय उत्तम रहेको छ ।
घर जग्गा तथा सवारी साधनको कारोबारबाट आम्दानी गर्न सकिनेछ । कृषि तथा पशुपालन व्यावसायमा समय खर्चिनेहरुले पनि राम्रो रुपैया पैसा कमाउन सक्नेछन् । अध्ययन तथा अध्यापनमामा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्न सकिनेछ । मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नेछ ।
राजनीतिक र सामाजिक प्रतिष्ठा कायम राख्न सकिने हुनाले मान सम्मानमा वृद्धि हुनेछ । बन्धुबान्धव र दाजुभाइको सहयोग लिएर राम्रा तथा उत्पादनमूखि काम गर्न सकिनेछ । व्यापारिक वा दैनिक कामहरू सन्तोषजनक ढंगले सम्पन्न हुनेछन् । यात्राको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ ।
बौद्धिक र चिन्तनमूलक क्रियाकलाप दिन बित्नेछ भने घरपरिवार र सन्तति पक्षको सहयोग मिल्नेछ । सामाजिक र परोपकारका क्षेत्र केही समय व्यतीत हुन सक्छ । दैनिक उपभोग्य बस्तुको व्यापारबाट मनग्गे लाभ लिन सकिनेछ । कुटुम्बबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त हुनेछ ।
दसैं बिदामा घर गएका शिक्षक न’फर्किएपछि वडा अध्यक्षले लगाइदिए विद्यालयमा ताला
धनकुटा हिलेका दुई जना भर्खरका युवती र ४६ बर्षीय बुद्धीमान तामाङ र किन पक्राउ परे ? कारण थाहा पाएर पर्नु हुन्छ अचम्ममा
यी १२ जोडी सेलेव्रिटी: कोही खुलेर, कोही गुपचुप प्रेममा मस्त (तस्बिरसहित)
एकाबिहानै ट्रकले ठ क्कर दिदा आमा र छोराको मृ’त्यु